Good Governance အကြောင်း ဒေါက်တာ ၀ါဝါမောင် ဟောပြောပါမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » Good Governance အကြောင်း ဒေါက်တာ ၀ါဝါမောင် ဟောပြောပါမည်
Good Governance အကြောင်း ဒေါက်တာ ၀ါဝါမောင် ဟောပြောပါမည်
Posted by Good Idea on Aug 27, 2011 in Society & Lifestyle | 15 comments
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… အစိုးရသစ် လက်ထက် သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့တဲ့ Good Governance ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ။ သိချင်ရင် ဒေါက်တာ ၀ါဝါမောင်ရဲ့ ဟောပြောပွဲ သွားနားထောင်ကြပါ။ ဖိတ်စာကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါကြောင်း… အားလုံးကို လေးစားလျှက်… Good Idea Invitation We request the pleasure of your company at the seminar on ” Good Governance and Private Sector ” by Dr. Wah Wah Maung Programme Date : 3rd September (Saturday) Time : 02:00 PM Venue : UMFCCI (Head Office), No(29), Min Ye` Kyaw Swar Street, Lanmadaw Tsp , Yangon.
သွာတော့ နားထောင်ချင်ပါရဲ.့ ဗျာ။ခက်နေတာက သူကိုယ်၌က သန်းရွှေက လိုင်စင်ထုတ်ပေးတဲ့ without ဖြစ်နေလေတော့—မယုံရဲသေးဘူး
” သန်းရွှေက လိုင်စင်ထုတ်ပေးတဲ့ without ” စကားလုံးမူပိုင်ခွင့်တောင်ရသင့်ပါတယ်
ဒါကို Good Governance လို့ဆိုရမယ်။
မိစ္ဆာကောင်လူသတ်သမာများက Good Governance အကြောင်းမိန့်ကြားတော်မူမယ်ဆိုတော့၊
Good Idea ရေဆောရီးဗျ ခင်ဗျားပို(စ်)တင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်မျိုး
ဖြစ်လာတာကတစ်မျိုး.. အသည်းယားလို.ပါဗျာ ဘေးထိုင်ဘုပြော
(ငဖွတွေရောက်နေဘီဗျို. ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို.သတိထားကြပါ) ********
In this comment, you looked rude.
Please see it & think it your self.
Some might be older than you.
ဟုတ်တယ် အစ်ကို ကျွန်တော်ရိုင်းသွားတယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်။
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ပြော”ရဲ”ရမှာပေါ့..။ တဖက်သား နားဝင်မရိုင်းဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော..။
အဲ.. မှားမှန်းသိရင်လည်း ၀န်ခံ”ရဲ”ရမှာပေါ့..
လူတွေ ဟာ အမြဲ တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့
တစ်ချို့ ကိစ္စတွေ မှာ ကြတော့
ကိုယ့်ထက် သာ နေတာ
ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာ ကို လုပ်ပြတာ
ကိုယ် လုပ်ခွင့် မရှိတာ မျိုး ကို လုပ်ခွင့်ရသွားတာ မျိုး နဲ့ ကြုံရင်
မကောင်းတဲ့ စိတ်သဘောထား ဝင်ပြီး
မဟုတ်တဲ့ မကောင်းတဲ့ မလုပ်သင့်တဲ့ ဟာ တွေ ကို
ပြောဆို ၊ လုပ်ကြတော့တာပါပဲ ။
ဘယ်သူကောင်းကောင်း ၊ မကောင်းကောင်း
ထိုသူ သည် ကိုယ်ကျွေးတဲ့ ထမင်းစားပြီး ၊ ကိုယ့်ဆီ က ပိုက်ဆံ ကို ယူပြီး
လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး လို့ သဘောမပေါက်ကြတော့ဘူး လို့ 
Thank you Captain America, for your “decent” reply.
I noticed you areagood guy ( normally ).
That’s why, I used “In this comment” ( only in this particular comment ).
နားထောင်ချင်ပေမယ့် အလုပ်နဲ့ဖြစ်နေလို့ သွားနားထောင်လာတဲ့သူတွေ ပြန်ရှယ်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း ပြောမယ့်သာပြောကြတာ ဟောပြောတာတွေပဲရှိပြီး တကယ့်လက်တွေ့ လိုက်မလုပ်ကြတာ ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးနော်….
Dr. ၀ါဝါမောင်က Ph.D ဘွဲ့ ရပြီး ဒေါက်တာ ဖြစ်လာတာ … ။ အခုတော့ ဘာတွေ ဟောပြောမလဲ မသိပေမဲ့ .. အရင်က TTS မှာ သူ General management အကြောင်း ဟောပြောပွဲ လုပ်တုန်းကတော့ … အရမ်းကို အပြောကောင်းတယ် …. ကျွန်မလို ဂျစ်ကန်ကန်လူတောင်မှ … ထော်လော်ကန့်လန့် မတွေးပဲ … အော် … ဒီလိုဆိုတော့ ဟုတ်သားပဲ တွေ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ရော … ။
တော်တာကတော့ တကယ့်ကို တော်တဲ့ .. အမျိုးသမီးပါ …။
Dr. ၀ါဝါမောင်က Ph.D ဘွဲ့ ရပြီး ဒေါက်တာ ဖြစ်လာတာ … ။ အခုတော့ ဘာတွေ ဟောပြောမလဲ မသိပေမဲ့ .. အရင်က TTS မှာ သူ General management အကြောင်း ဟောပြောပွဲ လုပ်တုန်းကတော့ … အရမ်းကို အပြောကောင်းတယ် …. ကျွန်မလို ဂျစ်ကန်ကန်လူတောင်မှ … ထော်လော်ကန့်လန့် မတွေးပဲ … အော် … ဒီလိုဆိုတော့ ဟုတ်သားပဲ တွေ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ရော … ။ တော်တာကတော့ တကယ့်ကို တော်တဲ့ .. အမျိုးသမီးပါ …။
မဝါဝါမောင် က အခုတော့ ဒေါက်တာဝါဝါမောင်ပေါ့လေ။
သူက အိန္ဒိယ မှာ ရှိနေတဲ့ မသင်းသင်းအောင် နဲ့ အတန်းတူ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။
ကိုယ့်ထက် အသက်ကော အတန်းကော အများကြီး ကြီးပါတယ်။
သူက နိုင်ငံရေးအရတော့ Progressive ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်မယ်လို့ ယုံရတာပဲ။ ကြီးလာလို့ပြောင်းသွားရင်တော့မသိဘူးလေ။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အတော်ကဲတာဗျ။ ဘဲနှစ်ပွေ ထားတာ၊ တကယ်ပြောတာ။
အသက်တော်တော်ကြီးတဲ့အထိ အပျိုကြီးတော့ လုပ်နေသေးတာပဲ။ ခုတော့ မသိဘူး။